သမိုင်းဝင် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ မက်ဆီရဲ့ကိုပါအမေရိကဖလားဓာတ်ပုံ – Play Maker Sports Journal
July 19, 2021 playmaker Sports News 0
အာဂျင်တီးနားစူပါစတားလီယွန်နယ်မက်ဆီရဲ့ကိုပါအမေရိကဖလားနှင့်တွဲရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံဟာအင်စတာဂရမ်သမိုင်းမှာအားကစားဆိုင်ရာဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ Like အများဆုံးရရှိတဲ့ဓာတ်ပုံအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဆီဟာကစားသမားဘဝမှပထမဆုံးနိုင်ငံတကာဆုဖလားဆွတ်ခူးနိုင်ပြီးနောက်အဝတ်အစားလဲခန်းမှာကိုပါအမေရိကဖလားနှင့်အတူတွဲပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ယင်းဓာတ်ပုံကို “Whatabeautiful madness! This is unbelievable! Thank you,God! We are champions! ဆိုပြီးရေးသားကာ အင်စတာဂရမ်မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။
မက်ဆီရဲ့ဓာတ်ပုံဟာ Like ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျော်ရရှိထားကာဆိုရှယ်မီဒီယာသမိုင်းတွင် Like အများဆုံးရရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံများစာရင်းမှာအဆင့် ၆နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။သူ့ဓာတ်ပုံဟာဘီလီအီလစ်ရှ်၊ XXXTentacion ၊ အေရီယာနာဂရန်ဒီနှင့် ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် ကြက်ဥဓာတ်ပုံတို့ပြီးနောက် Like အများဆုံးရရှိတဲ့ဓာတ်ပုံအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။
တစ်ဖက်တွင်ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့မာရာဒိုနာအားဂုဏ်ပြုကာအတူရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံကလည်း မက်ဆီရဲ့ဓာတ်ပုံနီးပါး Like ရရှိနေပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုရဲ့မာရာဒိုနာနှင့်တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကလည်း Like ၁၉,၈၅၆,၂၀၅ (ယခုသတင်းရေးနေချိန်) ရရှိထားပါတယ်။
မက်ဆီရဲ့အင်စတာဂရမ်အကောင့်ဟာလည်း Follower သန်း ၂၀၀ ကျော်ရှိကာ Follower အများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များထဲမှတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
သမိုင္းဝင္ ဓာတ္ပုံတစ္ပုံျဖစ္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ မက္ဆီရဲ႕ကိုပါအေမရိကဖလားဓာတ္ပုံ
အာဂ်င္တီးနားစူပါစတားလီယြန္နယ္မက္ဆီရဲ႕ကိုပါအေမရိကဖလားႏွင့္တြဲ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ဓာတ္ပုံဟာအင္စတာဂရမ္သမိုင္းမွာအားကစားဆိုင္ရာဓာတ္ပုံေတြထဲမွာ Like အမ်ားဆုံးရရွိတဲ့ဓာတ္ပုံအျဖစ္မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
မက္ဆီဟာကစားသမားဘဝမွပထမဆုံးႏိုင္ငံတကာဆုဖလားဆြတ္ခူးႏိုင္ၿပီးေနာက္အဝတ္အစားလဲခန္းမွာကိုပါအေမရိကဖလားႏွင့္အတူတြဲၿပီးဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးခဲ့ပါတယ္။ယင္းဓာတ္ပုံကို “whatabeautiful madness! This is unbelievable! Thank you,God! We are champions! ဆိုၿပီးေရးသားကာ အင္စတာဂရမ္မွာတင္ခဲ့ပါတယ္။
မက္ဆီရဲ႕ဓာတ္ပုံဟာ Like ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိထားကာဆိုရွယ္မီဒီယာသမိုင္းတြင္ Like အမ်ားဆုံးရရွိတဲ့ ဓာတ္ပုံမ်ားစာရင္းမွာအဆင့္ ၆ေနရာမွာရပ္တည္ေနပါတယ္။သူ႔ဓာတ္ပုံဟာဘီလီအီလစ္ရွ္၊ XXXTentacion ၊ ေအရီယာနာဂရန္ဒီႏွင့္ ကမာၻ႔စံခ်ိန္တင္ ၾကက္ဥဓာတ္ပုံတို႔ၿပီးေနာက္ Like အမ်ားဆုံးရရွိတဲ့ဓာတ္ပုံအျဖစ္ရပ္တည္ေနပါတယ္။
တစ္ဖက္တြင္ခရစၥတီယာႏိုေရာ္နယ္ဒိုရဲ႕မာရာဒိုနာအားဂုဏ္ျပဳကာအတူ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ဓာတ္ပုံကလည္း မက္ဆီရဲ႕ဓာတ္ပုံနီးပါး Like ရရွိေနပါတယ္။ေရာ္နယ္ဒိုရဲ႕မာရာဒိုနာႏွင့္တြဲ႐ိုက္ထားတဲ့ဓာတ္ပုံကလည္း Like ၁၉,၈၅၆,၂၀၅ (ယခုသတင္းေရးေနခ်ိန္) ရရွိထားပါတယ္။
မက္ဆီရဲ႕အင္စတာဂရမ္အေကာင့္ဟာလည္း Follower သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ Follower အမ်ားဆုံးပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲမွတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။
ဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူးရွန်းနီရဲ့ဒါဘီကို အနိုင်ယူပြီး ရာသီကြိုခရီးကို အနိုင်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ သရဲနီ